ဘုန်းကြီးလာထိုးတဲ့ တက်တူး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဘုန်းကြီးလာထိုးတဲ့ တက်တူး
Posted by ဦးသု on Dec 15, 2014 in Creative Writing | 31 comments
ပြန်ဝင် ပိုစ့် ၁
ဖေ့ဘွတ်မှာ မတင်ချင်လို့ ဒီမှာတင်လိုက်တာ
ဘုန်းကြီးနဲ့တက်တူး နဲ့ မအပ်စပ်ဘူးရယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူး
ရန်ကုန်ဘဆွေရဲ့ မြန်မာပြည်သား စာအုပ်ထဲမှာဆိုရင် တန်ဆောင်မုန်းညမှာ ကိုရင်ကြီးကတစ်ရွာလုံးက ယောက်ျားပျိုတွေကို ထိုးကွင်းထိုးပေးတာလေ။
အဲဒီနေ့က ညနေသုံးနာရီလောက် ဘုန်းကြီးနှစ်ပါးလာမေးတယ်
ဟုတ်ကဲ့ ရပါတယ်ဆိုတော့ ဈေးပြောတော့ဘုန်းကြီးက မတတ်နိုင်ပါဘူး
အဲဒါနဲ့ လက်မောင်းအတွင်းသား မှာမြားနတ်မောင် သေးသေးလေးထိုးချင်ပါသတဲ့
ရပါတယ်ဖျာ့ဆိုတော့ကာ ည ၇နာရီလောက်လာထိုးလို့ရလားဆိုတော့ အော်ဘုန်းကြီးဆိုတော့လူရှင်းတဲ့အချိန်လာထိုးတာပဲရပါတယ်လေဆိုပြီးလက်ခံလိုက်မိတယ်။
အချိန်ကာလကိုကြည့်ပြန်တော့ ကထိန်ပွဲကြီးပြီးကာစ နှစ်ရက်မြောက်မှာပေါ့ ။
ဘုန်းကြီးေ တွရေလန်းနေတဲ့အချိန်လေ ဘာတဲ့ ဖုန်းဆိုင်မှာတောင် S5 လာဝယ်သတဲ့ ringtone လေးကလဲ (ပါးပြင်မှာ သနပ်ခါးလေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာကွာ) ဆိုပဲ။ ဖေ့ဘွတ်မှာ ဖတ်မိတာပါ။
အဲဒါထားပါတော့ ဘုန်းကြီးကရောက်လျှင်ရောက်ချင်းဆိုသလို ဖုန်းတွေဝင်လာပါတယ် ဇောတိက ဘယ်ဈေးနဲ့လာကောက်မယ်။ သမ္မတ ဘယ်ဈေးဘာညာပေါ့ ။ သင်္ကန်းဝယ်ရောင်းပွဲစားတွေပါ။ အဲဒီကိစ္စက တော်ရုံဘုန်းကြီးမလွတ်ပါဘူး ငယ်ငယ်တုန်းက နွေရာသီသုံးလလုံး ကိုရင်ဝတ်ဘူးတော့ အခုထိ ဘုန်းကြီးဘယ်အချိန်ဝတ်ဝတ် လက်ကတော့ ကောင်းကောင်းထိုးတတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဝတ်တဲ့ကျောင်းက ဘုန်းကြီးတွေလဲ မဟုတ်တာမလုပ် ညဘက်အပြင်မထွက်ပေမယ့်အဲဒါလေးတွေတော့ရောင်းစားတာပဲ။ ဆိုလိုချင်တာက ဒကာဒကာမတွေရှေ့မှာ အဲဒီကိစ္စတွေ ဖုန်းနဲ့ပေါ်တင်ကြီးဆက်ပြီးတော့ မရောင်းစားသင့်ဘူးပေါ့ဗျာ သင်္ကန်းမှာ ကထိန်ဆိုပြီးလှူထားတဲ့သူတွေက အဲဒီဖုန်းဆက်သံတွေကြားရင်ဘယ်လောက် အကုသိုလ်များလိုက်မလဲ။
အဲဒီကိစ္စပြီးတော့ ဒကာမကဖုန်းဆက်ပါလေရော ဘယ်ရောက်နေလဲ ပြန်လာရင် အအေးဝယ်ခဲ့ဖို့ သုံးခါလောက်ဆက်တယ်။ ဟူး ဒီခေတ်မှာလဲ မာတုဂါမ (သက်ကြီးရွယ်အိုမပါ) ဧည့်စာရင်းမတိုင်ပဲ တည်းနေတဲ့ကျောင်းတွေတော်တော်များနေတယ်ထင်ပါ့။
တက်တူးက တစ်နာရီခွဲလောက် ထိုးပြီး ပြီးသွားတယ်။ တန်ရာတန်ကြေးယူတယ်။ ဈေးမလျော့ဘူး။ သမာအာဇီဝ လုပ်စားတာ ။ ဘုန်းကြီးဆီက ပိုက်ဆံပြန်ယူလို့ လိပ်ပြာမလုံတာမျိုးမရှိဘူး။ သံဃာပစ္စည်း အဆိပ်သီးဆိုပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ ဘာမှမဆိုင်ဘူး ။ ခံချင်းခံ ဟိုဘုန်းကြီးပဲခံရမှာလို့ပဲတွေးတယ်။
kyaw kyaw nyo says:
တက်တူး လာထိုးတဲ့ ဘုန်းကြီး
Play Boy တို့လို နာမည်တွေနဲ့ ဖွင့်ပြီး…
ကောင်မလေးတွေနဲ့…ချက်တင်ထိုင်နေတဲ့… ဘုန်းကြီးတွေတောင်… ရှိသေးတာပဲ..
နောက်ဆို.. KTV မာဆတ် သွားတဲ့ ဘုန်းကြီးတောင် ရှိလာနိုင်သေးတယ်..
long time no see ပါ။
ဝီဝီတို့ လည်း ….
ကိုယ့်သာသနာတွင်း ကိုယ်သန့်ရှင်းအောင် အရင် လုပ်သင့်ပြီ။
ကိုယ့်အလုပ်မဟုတ်တဲ့ ဥပဒေတွေ ပြုမဲ့ အစားးးးး
သူများ ဘာသာကို လက်ညှိုးထိုးမဲ့ အစားးး
ကိုယ့်ဘာသာ သာသနာ လက်ညှိုးအထိုးမခံရအောင် အရင် လုပ်သင့်ပြီ။
နာလည်း ပို့(စ) တစ်ပုဒ် ရေးချင်တာအေ။ အကြောင်းအရာလက်ထဲရှိပြီးးး
ဒါမျိုး အတွင်းကျကျသိတဲ့ အပိုင်းထဲကနေ။
(ဒီလို ဘာသိဘာသာနေတဲ့သူတွေများလို့လည်း ဒီလိုတွေဖြစ်နေသလားတော့ မသိ )
လူတွေက စားဝတ်နေရေး အတွက် လုံးပန်းရှာဖွေ ထိုဒုက္ခတွေမှလွတ်ချင်တော့ ဘုရားသွားကျောင်းတက် ပုတီးစိပ်တရားထိုင် ကမ္မဌာန်းရှုလို့ တရားကျင့်ကြတယ်၊ ဘုန်းကြီးတွေက ဘောပွဲကြည့် ဘောလုံးလောင်း တက်တူထိုး အင်တာနက်ဆိုင်ဂိုးနဲ့ တွေ့လာရတယ်။
ဘုန်းကြီးအလုပ် လူကလုပ်လို့၊ လူအလုပ်ကို ဘုန်းကြီးတွေလုပ်တဲ့ခေတ်သို့များ လှမ်းချီလေမလား စိုးရိမ်ဖွယ်။
ကျုပ်ဆိုရင်တော့.. လောက်စပီကာကြီးနဲ့.. လောက်(louds)လုပ်သမားတွေအရင်တိုင်တယ်..။
ဒီတစ်ခါဘဲ သဂျီးကွန်မန့်ကို အစိမ်းပေးချင်စိတ်ပေါက်တယ်
.အံ့ရော ဇီဇီရယ်…ကွန်မန့်မှာပုံတွေပါတွေတင်တတ်လို့ပါလား :n:
အဲဒါ သများ မလုပ်တတ်ဘူးးး
အမြင်မတော်တဲ့ အက်ဒီတာဂျီး ပြင်သွားတာဘာ!!
ဟိုတနေ့ညကပဲ ကိုးထပ်ကြီးဖက်ကဖြတ်ပြန်လာတာ အိုက်နားကစားသောက်ဆိုင်မှာ ဘုန်းကြီးတွေ သင်္ကန်းတကားကားနဲ့။ အအေးသောက်တယ်ဆိုအုံးတော့ ပါဆယ်လေးဆွဲသွားပေါ့။ ဘယ့်နှယ့်ဆိုင်ထိုင်လို့ အိုဘယ့်ဝီဝီသိပါလေစ။ ထူးပါဘူး ဝီဝီလဲဒီပုတ်ထဲကဒီပဲပါပဲလေ
ကိုယ့်​မျက်​​ချေးမမြင်​ဘဲ သူများမျက်​​ချေးလက်​ညှိုးထိုးတာ.. မျိုး​စောင့်​ဥပ​ဒေကိုယ်​​တော်​​တွေ​ပေါ့
.သာသနာကို ဖျက်မယ့် သင်္ကန်းဝတ်တွေ…
ဝီဝီ က ဘုန်းကြီးချင်းလဲ ဖြဲပါတယ် ထေရဝါဒတိုက်ပွဲဆိုတဲ့စာအုပ်မှာ မဟန ကိုတောင်ဖြဲထားတယ်။
ပီနန်ဆရာတော်နဲ့ မဟနနဲ့ မဟာသန္တိသုခဆယ်ထပ်ကျောင်း ကို လုတဲ့ကိစ္စမှာလဲ ဝင်ဖြဲတယ်။
အခုတောင် ဖြဲစရာမရှိလို့ သင်းပိုင်အဟောင်းတွေဖြဲပြီး ဖုန်သုတ်ဝတ်လုပ်နေတယ်။
အာ့လောက်အဖြဲသန်ဒါ အရင်တုံးက ဖိုတိုလစ်သိုရဲ့ ရွီဆိုက်ကယ်ဌာနမှာ အလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးသလားမှ မသိတာ ခိခိ
အဲ့လောက်အရဲမတင်းနဲ့အေ့ တော်ကြာ ညည်းပုံမှာ ကျက်ချီခတ်ယီးနဲ့ သံဂါ သာသဏာစော်ကားသူ တက်တူးသမားများ အလိုမရှိဆိုပီး ထအော်မှဖြင့် ကမ္ဘာကျော်သွားအုံးမယ်နော်
ကျုပ်အထင် ဒီပေ့ခ်ျယီးတခုလုံး စခွင်ရှော့ပီး ဘနိုင်းထုတ်ကြမလားမသိဘူးရယ်
ဘုရားကဟောခဲ့ပြီးသားပဲ။ ဒါနဲ့ စကားမစပ် ကျတော် လကုန်လာခဲ့မယ်နော် ဦးသု။
နဖူးတို့ ပါးတို့မှာ လက်ဆောင်ပေးပါတယ်
အဲဒီအာဗတာဘီလူးက.. ကျုပ်နုစဉ်က.. Illustrator နဲ့ဆွဲထားတာကြီးဗျနော..။
ကို​လေး အင်းဝဂုဏ်​ရည်​​ရေးတဲ့ တက်တူးအ​ကြောင်းကဗျာ
ဆိုင် နာမည်ပြောင်းရင် logo အနေနဲ့ သုံးချင်ပါတယ်။
Copy ဆိုပေမယ့် မူပိုင်ခွင့်ပြုထားတော့ အားရှိတာပေါ့
Yes or No လေး အကြောင်းပြန်ပေးပါခင်မျာ။
တကယ်တော့.. ကျုပ်က.. ဘီလူးစာအုပ်ထုတ်ချင်နေတာ….။
မြန်မာပြည်တလွှားက.. ဘီလူးအရုပ်တွေချည်း.. ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး.. စာတန်းပြုစုချင်တာပြောတာနော…။
ဟုတ်လား သူကြီး ကျွန်တော်က မြန်မာမှုလက်ရာတွေ ရသလောက်ဒေါင်ပြီးသိမ်းတာ။ ရှိသေးရင်မျှပါအုံး
အားရင်လုပ်မယ်လုပ်မယ်ဆိုပြီး မှန်းထားတာက.. အင်းအိုင်ခလှဲ့လက်ဖွဲ့စမ ပုံတွေ..။
ဂဇက်တွေ့ဆုံပွဲမှာ လစဉ်ဆုရသူတွေကိုပေးဖို့ ပို့ထားတဲ့.. ရွှေပြားဒေါ်လှ၁၀၀ တွေက.. မင်းသိင်္ခ မနောမယ စာအုပ်အတိုင်းမန်းထားတာနော..
ဆုရတဲ့သူ.. ငွေလာဘ်တွေပါဝင်လာမှာ… လို့..။
ကိုလေး အင်းဝဂုဏ်ရည် (၁၉၇၀)
ငယ်ငယ်က အဖြစ်တော့ ရှိတယ်ဗျ.. နားဖောက်တာ.. မျက်ခုံးဖောက်တာ.. လျှာဖောက်တာ.. ခေတ်စားခဲ့တယ်လေ.. အဲဒါ ကိုရင်လေးတပါးက ဖောက်ပေးပါဆိုလို့ .. မသင့်တော့ပါဘုရားပေါ့… ရတယ်ဖောက်ဆိုလို့ ဖောက်လိုက်တာ မေ့သွားပါတယ်ဆို…
အနော်တို့ ဒေသက ကျောင်းထိုင်ကိုယ်တော်တွေလည်း မာတုဂါမနဲ့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ညားကြသေးသဗျာ။ အဲဒါတွေလည်း တစ်ဒွတ်ခ :buu:
.ဒီပိုစ့်လေး အခုမှ တွေ့မိလို့ဗျာ…
.သံဃာ့ပစ္စည်း အဆိပ်သီး ဆိုတဲ့စကားက သံဃိကပစ္စည်းကို အခွင့်မရှိပဲ သုံးစွဲ ခိုးယူ တာကိုဆိုလိုတာပါ။
.ဘုန်းကြီးပိုက်ဆံသာ အဆိပ်ဖြစ်ရမယ်ဆို ကျုပ် အဆိပ်တက်လို့သေတာကြာပေါ့…
.လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကျုပ်ဘ၀ ဒုတိယမြောက်ကားရောင်းတာ ဘုန်းကြီးကိုရောင်းတာ…
.ကထိန်မှာ ဘုန်းကြီးတွေကို လှူတဲ့သင်္ကန်းတွေအားလုံးက ရိုးရိုးသင်္ကန်းပါ
.၀ိနည်းလွတ်အောင် ကထိန်အရံသင်္ကန်းလို့တော့ လှည့်ပတ်ခေါ်လို့ရပါတယ်။
.အဲဒါလဲ လှည့်ပတ်တယ်ဆိုမှတော့ ရှင်းရှင်းပြောရရင်
.အဲ …. လှည့်ပတ်တာပဲပေါ့…။
.ကထိန်သင်္ကန်းဆိုတာ တစ်စုံတစ်ယောက်က ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကို အ၀တ်စတစ်ခု .ကထိန်ခင်းဖို့ပါလို့ ပြောလှူရင်-
.ဘုန်းကြီးတွေက အဲဒီအ၀တ်စကို သင်္ကန်းဖြစ်အောင်ပြုပြင်ပြီး ကထိန်ခင်းပါတယ်။
.အဲသည် သင်္ကန်းသာလျှင် ကထိန်အကျိုးတွေရတဲ့ ကထိန်သင်္ကန်းဖြစ်ပါတယ်။
.(အဲသည်ကထိန်အကျိုးဆိုတာတွေကလဲ ဒီခေတ် မလိုအပ်တော့ပါ။)
.ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာ ဒကာမတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။
.ဒကာမတွေတင်သာမ ဒကာထီး၊ ဒကာ ပုစုခရု တွေလဲ ရှိတတ်ပါတယ်။
.တစ်ချို့ကတော့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ အခြားအရပ်ကရောက်လာပြီး တည်းခိုတာပါ။
.အချို့ကတော့ အဆောင်ငှားစားတဲ့ပမာ လူတင်ထားတာပါ။
.တစ်ချို့ကတော့ ကျုပ်လဲ ပါးစပ်က ပြောမထွက်ပါ။
.ညဖက် ဘုန်းကြီး အအေးသောက်တာများ……
.ညဖက် လဘက်ရည်ဆိုင်ထိုင်၊ လဘက်ရည်နဲ့ ပဲလှော်ကြော်သုပ်၊ .ခရမ်းချဉ်သီးသုပ်မှာစားပြီး ဘောလုံးပွဲထိုင်ကြည့်တဲ့ ဘုန်းကြီးတွေ နေရာတကာမှာတွေ့နိုင်တယ်။
.အဲဒါကိုတောင် ဒီကိုယ်တော်တွေ ဒီလောက်နဲ့ ကျောင်းပြန်ရင်
.ကျုပ်မှာ သက်ပြင်းချပြီး ကြည်ညိုရပါသေးကြောင်း….
.ဘုတ်အုတ်ထဲက ဘုန်းကြီးမျိုးကတော့ မြင်ဖူးချင်ရင်
.ကိုယ့်ဘာသာ ဘုန်းကြီးဝတ်ပြီး သိမ်မဆင်းခင် မှန်ထဲသာ ကိုယ့်ဘာသာပြန်ကြည့်ပေတော့…… လို့..